मलेसियाबाट आएको शव बुझ्न एयरपोर्ट पुगेका नानीबाबुसहित एक परिवार भावविह्वल ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाज मार्फत मलेसियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ ।
मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका अभिभावकको श”व जहाजले शनिबार ल्याइदिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा भावविह्वल भएका साना नानी बाबुसहित एक परिवार !
निगमको वाइड बडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकै पटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव बिहान वाइडबडी जहाजमार्फत नेपाल ल्याइएको निगमको उडान सञ्चालन विभागले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको समन्वयमा नेपाल ल्याइएका ती शव आजै आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस:”
शान्ति सेनामा छिमेकी मुलुक भारतलाई पछि पार्दै नेपाल दोस्रो नम्बरमा -संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को शान्ति सेना योगदान गर्ने मुलुकहरुको वरीयतामा नेपाल दोस्रो नम्बरमा उक्लिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल छिमेकी मुलुक भारतलाई पछि पार्दै नेपालले स्थान सुधार गरेको हो ।
यूएन मिसनमा खटिने सुरक्षा फौजको सूचीमा अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश पहिलो नम्बरमा छ भने अफ्रिकी मुलुक इथोपिया चौथो नम्बरमा छ । यूएनबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपालको ५ हजार ५ सय ७१ सुरक्षाकर्मी शान्ति स्थापनाका लागि खटिएर साउन पहिलो हप्तादेखि दोस्रो नम्बरमा उक्लिएका सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार नेपालबाट २९४ महिला शान्ति सेनामा खटिएका छन् । पहिलो नम्बरमा रहेको बंगलादेशले ६ हजार ५ सय ५४ र तेस्रो स्थानमा रहेको भारतले ५ हजार ५२५ जना सुरक्षाकर्मी शान्ति स्थापनाका लागि खटाएका छन् ।
भारतपछि अफिक्रि मुलुक इथोपिया र रुवान्डा क्रमश चौथौ र पाँचौ स्थानमा रहका छन् भने पाकिस्तान छैटौं स्थानमा रहेको ५ । इथोपियाले ५ हजार ४८८, रुवान्डाले ५ हजार ३३१, भारतले ५ हजार ५ सय ४८ र पाकिस्तानले ४ हजार ५ सय १६ जना सुरक्षाकर्मीहरु शान्ति स्थापनाका लागि खटाएका छन् ।
सेनाबाट अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार ३ सय ४३ जनाले शान्ति सेनामा गएर काम गरेका छन् । नेपालले सन् १९५८ मा पहिलोपटक लेबनानमा ५ जना सुरक्षाकर्मी अब्जरभरको रूपमा पठाएर शान्ति मिसनका लागि काम गर्न थालेको थियो ।
त्यसपछि नेपालले पहिलो कन्टिन्जेन्ट पुरानो गोरखा बटालियनलाई सन् १८७४ मा इजिप्टमा पठाएर शान्ति सैनिकको रूपमा काम गरेको हो । यसबीचमा नेपालबाट ६ जना फोर्स कमान्डरसमेत भइरहेका छन् ।